Abo bajongene noThotho lweYonkis ekugqibeleni bonke bakhululwa | Iindaba zeGajethi
Kwaye ukuba yonke le nkqubo iqale namhlanje isigwebo sokugqibela siya kwahluka kakhulu ukusukela Kule mihla, iwebhusayithi yekhonkco ithathwa njengolwaphulo-mthetho. Ngayiphi na imeko, abo banoxanduva lwewebhusayithi eyaziwayo yeYonkis Series, u-Alberto Garcia Sola, u-Alexis Oepfner Bernardet, uJordi Tamargo Barguño no-David Martinez Olivella, bakhululwe kulo naluphi na uhlobo lwentlawulo ababekwa ityala ngalo. Isigwebo sicacile kwaye sithi abenzanga naluphina ulwaphulo-mthetho ngokuchasene nepropathi enomxholo ababetyholwa ngawo yi-Ofisi yoMtshutshisi Woluntu kunye nezityholo zabucala.
Okucacileyo kukuba esi sigwebo besilungile kubo kwaye sele besitsho uninzi oluninzi esele selugwetyelwe ukugwetywa umtyholwa kubonisiwe ukuba akunjalo. Isigwebo esikhutshwe nguyeUMgwebi u-Isabel María Carrillo wegumbi lolwaphulo-mthetho elingu-4 laseMurcia icacile:
Kufuneka ndikhulule ndikhulule u-Alberto Garcia Sola, u-Alexis Oepfner Bernardet, u-Jordi Tamargo Barguño kunye no-David Martinez Olivella ngazo zonke izivakalisi ezithandekayo zolwaphulo-mthetho ngokuchasene nepropathi enomthetho ababetyholwa ngayo yi-Ofisi yoMtshutshisi woLuntu kunye nezityholo zabucala. iindleko ezibangelwe. Kwelinye icala, ukuxela ukuba akukangqinwa ukuba abatyholwa banolawulo ekusebenzeni ngokuchanekileyo okanye hayi kwikhonkco abaliqondisileyo, kwaye khange baqiniseke ngawo onke amaxesha ukuba iyasebenza kwaye ivumela ukufikelela okusebenzayo kokumanyelwayo umxholo. Akungqinwa ukuba akukho namnye kwabamangalelwa abane ofumene ingeniso ethe ngqo yezoqoqosho efunyenwe kwinani lokukhutshelwa kwezinto ezikhuselweyo zokumamela (izibonelelo ezifunyenwe ngumlayishi).
Ngale ndlela, iOfisi yoMtshutshisi ecele njengeyona nto iphambili kwisimangalo iminyaka emibini ejele okanye i-EGEDA kunye ne-546 yezigidi zeerandi zomonakalo obangelwe yile fayile. Amagqwetha ezokhuselo ayaphumelela ekwenzeni imisebenzi yawo kunye abathengi bakho bafunyaniswe bengenatyala ngokusemthethweni kolwaphulo-mthetho ababetyholwa ngalo. Inyani yile yokuba oku ngekuya kwahluka kakhulu ukuba iinyani bezithe zenzeka nge-1 kaJulayi ka-2015, xa umthetho wawulungiswa malunga noku, ucaphula ilungelo lokuqonda
Amakhonkco okanye ii-hyperlinks ezakhiwe, ezi-odolwe kwaye zahlelwa ngokweendlela ezahlukeneyo zamaphepha ewebhu khange zithathe ulwaphulo-mthetho ngexesha lokuxelwa kwabo, ke nangona kuyinyani ukuba baphinde bahambisa umxholo okhuselweyo kwiiseva zangaphandle, bebengenzanga naluphina ulwaphulo-mthetho. . Ke emva kweminyaka eliqela apho wonke umntu ebenika uluvo lwabo kule nyewe (eyona ibalulekileyo kwilizwe lethu kulwaphulo mthetho kwipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda owakhe wazama) isigwebo sejaji sicacile kwaye asinakumangalela umntu ngamnye otyholwayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Abo bajongene noThotho lweYonkis ekugqibeleni bonke bakhululwa
I-Smartwatch yeFossil Sport, enye indlela eyiyo nge-Wear OS [UHLAHLELO]